cooking Master ရွှေတိုက်စိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » cooking Master ရွှေတိုက်စိုး
cooking Master ရွှေတိုက်စိုး
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on May 27, 2013 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 43 comments
ဒီပိတ်ရက် အိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနားနေတာနဲ… ချစ်သုအုပ်ကလေးနဲ. မုန်.လုပ်စားမယ်စဉ်းစားတာပေါ့.. အင်း ဒါနဲ.ဘာလုပ်စားရမလဲ စဉ်းစားတော့.. ကိုရီးယား ဆူရှိလုပ်စားမယ်တဲ့ ချစ်သုအုပ်ကပြောတော့..
ကိုရီးယားများ အထင်ကြီးလို. တို.မြန်မာမှာလဲ အဲလိုမုန်.တွေရှိပါတယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ လက်စွမ်းပြရတော့တာပေါ့…
မန်းလေးမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ တချို.တလေ ရတတ်တယ်…… နာမယ်က ခနုံထုပ်……. နန်းတွင်းအစားအစာလို.ပြောတာပဲ…
ဘဲဥ ၄လုံး (ကြက်ဥ နဲ.လဲရတယ်.. ဒါပေမယ့် အရောင်မလှဘူး ဘဲဥက ၀ါဝါလေးအရောင်လှတယ်)
ကြက်သွန်ဥ ကြီးကြီး လေးလုံး
ပထမဦးဆုံး ကြက်သားကို ရေစင်အောင်ဆေး အတုံးအနေတော်လေးတွေ အသားချည်ပဲကိုတုံး အောက်ကလို
ပြီးရင် ကြက်သွန်ကိုလဲ ဒီလိုလေး လှီးထားလိုက်
အဲဒါပြီးတော့ ကြက်သားကို အရင် ဆီနဲနဲနဲ. နူးအောင်ချက်ပြီး ကြက်သွန်တွေထည့်ချက်
ကဲဒါဆို အထဲထည့်လိမ့်မယ့်အစာ တွေ ချက်ပြီးပြီ… ကဲ ဒါဆို လိပ်မယ့် ဟာလေးတွေ ဆက်လုပ်ကြမယ်…
ဒါကတော့ ဂျုံနဲ. ဘဲဥ နဲ.ကို ရေကျဲကျဲလေး ရောမွှေထားတာပေါ့… အဲအဲ တစ်ခု သတိထားရမှာက အပြစ်အကျဲ ကို သတိထားရမယ်.. ပြစ်လွန်းရင် ထူသွားမယ် လိပ်လို.မကောင်းဘူး ကျဲလွန်းရင် ပါးသွားမယ်.. ဆယ်လို.မကောင်းဘူးပေါ့…
အဲဒီအရည်ကျဲကျဲကို မီးအားမျှင်းမျှင်း နဲ. အောက်ကပုံထဲကလို ဇွန်းဖင်လေးနဲ. ၀ိုင်းဝိုင်းလေး ၀ိုက်ပေးလိုက် (အဲအဲ ဆီမထည့်ရဘူးနော်.. ဆီထည့်လိုက်လို.ကတော့ လိပ်ကုန်မှာ).. အဲဒါပြီးရင် ဇွန်းပြားလေးနဲ. အသားလေး ခွာယူပြီး ဘက်လှန် လိုက် ပြီးရင် ဆယ်လိုက်……
ကဲကဲ ဒါတွေ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ လိပ်ဖို.ပြင်ရတော့တာပေါ့.. ခုဏက ချက်ထားတဲ့ကြက်သားရယ်… ဂျုံဘဲဥ အပြားလေးတွေရယ်ကို..ဒီလိုပြင်
ဒါကတော့ ကြော်ငြာ ဟိဟိ
ကဲအားလုံးပြီးပြီ………. ဒီလိုလေးပြင်ပြီး စားကြမယ်…
ကိုကာကိုလာလေးနဲ. ကိုင်လိုက်လို.ကတော့ ရှယ်ပဲပေါ့……..
ကဲကဲ စားလို.သောက်လို.လဲ ပြီးရော…………………………………………….
ကဲ ပိတ်သတ်ကြီးလဲ.. ကျွန်တော်နဲ.အတူ…… စားလို.ကောင်းမယ်လို.ထင်ပါတယ်ဗျာ………… အိပ်မယ်စားမယ် အစီအစဉ်ကနေ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်………
ကွပ်ကီးမာစတာရွှေတိုက်စိုး :hee: :harr: :harr:
စားလို့ အဲ အဲလေ ငေးလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ ၊
စားကောင်းမှာ အသေအချာပါပဲ ၊
ဟုတ်တယ် ဗျို. ကိုမျိုးသန်.ရေ..
အိမ်အတွက် ပါဆယ်လေးယူသွားပါအုံး ရော့ရော့… အချဉ်လေးပါ ထည့်ပေးလိုက်တယ်… :harr:
တိုက်တိုက် တယ် တော် တော့။
၇ ပုံမြောက်မှာ ပက်လက်လေး ချက်နိုင်တယ်နော်။
ဟိဟိ အဲဒါ လေးပေါက်လို ပညာပြထားတာလေ……. ခိခိခိ
ယောက်ျားလေးတွေကအချက်အပြုတ်ပိုကောင်းတယ်ပြောကြတယ်..ချက်ပြုတ်ရင် စိတ်လည်းပိုရှည်တယ်.. တစ်ကယ့်ကိုစားချင်စဖွယ်ပဲ.. ပျော်ရွှင်စရာဘ၀လေးပါပဲ.. မောင်တစ်ထမ်း..မယ်တစ်ရွက်.. ယောက်ျားလုပ်သူကစဆုံးလုပ်တယ်.. မိန်းမလုပ်သူက စဆုံးမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်..
မမမစ်ရယ်.. မောင်တကော် မယ်တစ်ချက်ပါအေ…….. ခစ်ခစ်ခစ်…
Health & Fitness အောက်က Food, Drink & Recipes ထဲ ကက်တီဂိုရီ ပြောင်းထည့်ပေးလျင် နောင်လိုအပ်သည့်အခါ အလွယ်ရှာတွေ့မည်ဖြစ်ပါဂျောင်း… တံတွေးမျိုချရင်း ဖတ်ရှုအကြံပေးပါသည်…
ဟုတ်ကဲ့ ဦးကြောင် ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဗျာ…သင်းခရု…
၂ ယောက်စားတာလား?? ၃ ယောက် စားတာလား?? ဧည့်သည်ရော ပါသေးလား??
ဒီပို့စ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ အုပ်အုပ်တစ်ယောက် အလွန်ကံကောင်းကြောင်း သိသွားပါတယ် …
၅ယောက်လောက်တော့ စားလို.ရမယ်ထင်တယ်အစ်မ အခုပြထားတဲ့ ပန်ကန်ထဲက ဟာက တ၀က်ပဲရှိသေးတယ်…
အခုလိုအားပေးလို. ကျေးကျေး… :hee:
ကြားလဲမကြားဖူး၊စားလဲမစားဖူးတဲ့ ခနုံထုပ်လေးကို အားပေးရင်း…
သရက်သီးလေးတွေကိုပါ တစ်ဆက်တည်း မျက်စိကျ လိုက်ပါတယ်…
စားသောက်ပြီး ဆေးကျောင်းတက် ဆေးခန်းပါဖွင့် နိုင်တယ်ဆိုတော့
ဟင် ခနုံထုပ်စားပြီး သရက်သီးပါ အချိုတည်းသွားပါလား.. မြင်လဲမြင်တတ်ပ..
တော်သေးတာပေါ့.. ဘေးနားက ပန်းသီး ပန်ကန်မြင်မသွားလို. ဟိဟိဟိဟိ…
အော်ပထမတော့ အကုန်လုပ်ပေးတယ်ဆေးလိုက်တော့လို.ပြောတာ အဲဒါ ချစ်သုအုပ်က သူမအားဘူး ကိုယ့်ဟာကိုဆေးတဲ့…… ဒါနဲ. ဒေါကန်ပြီး တစ်ခွန်းထဲ နစ်နစ်နာနာ လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပြီး ပိုးစိုးပက်စက်ပြောပလိုက်တာ…………. ဟုတ် ……. လို………… အဟီးးးးးးးးးးးး :hee:
မိတိုက် နင်ဟာလေ အလှူ့ရှင်လက်ဖက်နဲ့ မျက်နှာလုပ်နေဒယ်….အဲဒါ နင့်ဗိုက်ပူအုပ်အုပ် လုပ်တာမလား ဟွင်း စားချင်ထာအေ … … .. နောက်တစ်ခါလုပ်ရင် ပြောအေ….. နင့်အုပ်အုပ်ကိုလာစား အဲလေ
အောင်မာအောင်မာ မဲတူမ ဂလန်.မ … နာလုပ်တာအေ့… အဲဒီဗိုက်လဲ နာလုပ်တာ……..အဲအဲ ဟုတ်ပေါင် အဟီးးးးးးးးရောတွားလို…
နောက်တစ်ခါ ချုံးတတီးကိတ် လုပ်ရင် ညည်းကိုကျွေးမယ်… ကင်သပိတ်ရောင်မ….. ဟွန်.
ဟမ်… မိန်းမမိဗိုက်က ဝါးပုံမရ… ခင်ဗျားတီးနေပုံပဲမြင်ရတယ်… ကိုယ်စားချင်လို့ကိုယ်လုပ်တယ်ပေါ့… ဟိ
ကမ္ဘာကျော် စားဖိုမှူးတွေက ယောက်ျားတွေဆိုတော့ ဆရာတိုက်ကို မအံ့ဩတော့ပါဘူးဗျာ…
ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့အိမ်ထောင်ကျတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးမှန်း အနေဝေးမှ မိန်းမတွေကသိကြသတဲ့…
ချက်နည်း လိပ်နည်း နိသသျှည်းကို စားချင်ရင်လုပ်ကြွေးဖို့ မှတ်သွားကြောင်းပါ… ဟီ ဟိ
အော်ကိုရင့်နှယ့် ကိုယ်လုပ်တာအရင်စားပြရတာပေါ့… ပြီးမှ ထွန်.ကျွေးဂျဒါ တစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက် ခိခိခိ…
ဟွန်.သူကျတော့ နည်းယူပြီး မျက်နှာလိုမျက်နှာရ လုပ်ကျွေးအုံးမှာများ………..ိဟိဟိဟိဟိဟိ…
ဟာဟ ကိုယ်လုပ်ပြီးကိုယ်ပဲစားနေတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ လက်ရာမြောက်ပုံရတယ်။ ( နာ့ကိုမကျွေး လို့အပုပ်ချဒါ )။ ကလေးက ကလေးလို မနေဘဲဒါတွေလဲလုပ်တယ်လား။ ကလေးကလေးနဲ့လက်သတ် စပ် တော့လူကြီးဘဲဂိုး။ အဲလာကြောင့်ပြောကြတာ။ အပြင်ပန်းပဲမကြည့်နဲ့ဆိုတာ။ အရပ်ကြည့်မိတော့ မှားတာပေါ့။ အာဟီးးးးးးးးးးးးးဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
တိန် တေပီချာ……. အရပ်သွားကြည့်တော့ မှားတာပေါ့ဒဲ့…….အမလေးးးးးးးအရပ်ကတို.ရဲ.ကြားလို.မှကောင်းကြသေးရဲ.လား……..
မုန်.လဲကျွေးရသေးတယ်…အရပ်လဲ စော်ဒကားသေးဒယ်…….ဟွန်….. အရပ်ကိုစော်ကားရင်ရပ်ကွက်လူကြီးနဲ.တွေ.မယ်……..တွေ.အုံးမယ်………
ဒီမယ် ဒီမယ် သများလို ပုပုလေးနဲ.ချောဒါ ရန်ကုန်မှာ ရှာကြည့် ထမင်းထုပ်သိုးသွားမယ်.. သများလိုဟာရှာရမှာမဟုတ်ဘူး………ငင်းငင်းငင်း…….
ထပ်မံလေ့လာ တွေ့ရှိချက်အရ.. ဟင်းချက်ကောင်းသော အမျိုးသားများကို မယားဖြစ်သူများ
အလွန်ချစ်ကြသည်..။ ဟေ့လူ ရွှေတိုက်ဂျီး.. ကွက်ကင်းမာစတာ တာ မာစတာဗျာ..
ကိုရင်တို့ လူပြိုကြီးတွေ မိန်းမမြန်မြန်ယူချင်အောင်တော့…
အဲ့လိုလေးတွေ မဆွယ်နဲ့လေ… ဟီးး..
ဗျာကို အော်ဟုတ်ကဲ့… အဟင့်
သများကို တရားခံရှာပြန်ဘီ……. ကိုရင်ဘာသာ ကိုရင် ယူချင်ယူချင်တယ်မပြောဘူး……
ကိုရင်က ပိုတောင် အချစ်ခံရအုံးမှာ သင်္ဘောပေါ်မှာ ကိုယ်ဟာကိုချက်ချက်စားနေကျဆိုတော့ ဟေဟေဟေ့
မထင်ပါဘူးး ကွတ်ကင်းမာစတာတဲ့ …နာကတိပီးသားးး
မမအုပ်လုပ်ထားပီးသားဟာတွေကို သူကအဆင်သင့်လေးး ဒါ့ပုံအရိုက်ခံတာာ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားးး…
အောင်မယ် အောင်မယ်.. နာဂ မလုပ်တတ်ဘဲ ဟန်လုပ်တယ်ပေါ့……
လာစမ်းဘာ… မယုံရင် ဘီယာ တစ်ဖာ ၀ယ်လာခဲ့……… နာသောက်ရင်း လုပ်ပြမယ်.. မုန်. ဟိဟိ
မောင်သူရ နဲ့ ရေငါး ကို ထောက်ခံတယ်ဟေ့။
အရပ်ကပုတလောက် ဇဂါးကျောတာာဖင်ဂေါင်းကျယ်တယ်….စထှာနော် ဟီးးးးး အတည်ကျောတာ…
တောက်ချင်းတောက် ဆေးခါးရည်ယူလာခဲ့မယ် တစ်ဖာစာ အဲ့ဆေးခါးရည်လေးသောက်ပြီးး
ငိငိ.. ရွှေရေငါးလေး..သူများလင်မယားတွေကြားဂ မုန့်ချိုစားနဲ့လေ.. ကြိုက်မှန်းမသိ..
ကိုရင်က အမှန်အကန် လုပ်ကျွေးမှာ.. (မုန့်..)
ဘီယာတွေ ယူချာလိုဘူး.. အနားက ယပ်ခပ်ပေးရင်
ဘွတ်အဲအော်ပီး.. နှာခေါင်းနဲ့ ကြော်ပစ်မှာ.. ငွိ..
ဟင် ကိုရင်….ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာာာ ဇဂါးဂျီးက…….
ဟင် ကိုရင် ……
နှာခေါင်းနဲ.ကြော်မယ်…….. ဟုတ်သလား.. လက်နဲ.လုပ်တာတောင် ခက်လို. နှာခေါင်းနဲ.ဆိုတော့ တကယ့်ပညာရှင်ပါလားနော်……ဟေးဟေးဟေး
လွယ်လွယ်လေး နဲ့ အရသာရှိမဲ့ပုံဟေ့။
တစ်ရက် လုပ်စားကြည့် မယ်။
ကျေးဇူး ပါ အုပ်အုပ် နဲ့ တိုက်တိုက် တို့ ရေ။
ဒါ့ပုံ နံပါတ် (၄) ကို ကြည့်ကြပါ ဗျို့။
အဲဒါမှ တကယ်ချက်နေတဲ့ သူ လို့ ထင်ရပါ၏။
ထိုသူမှာ မောင်တိုက် ဟုတ်ပုံမရ။
မောင်တိုက် သည် နှမ်းဖြူး နေပုံ နှင့် စားနေသူသာ ဖြစ်ပေသည်။
အမှန်လက်စွမ်းပြ ခဲ့သူ က အုပ်အုပ် ကိုများ၊
မပြောတော့ဘူး။ မပြောတော့ဘူး။ ပြောကို မပြောချင်တော့ဘူး။
(ဒေါ်မြလေး လေသံ ဖြင့် ဖတ်ကြပါ။)
နှမ်းဝင်ဖြူးတဲ့သူက မာစတာဖစ်ပြီး တကယ်လုပ်တဲ့သူကိုကျတော့ တမျိုးထင်တယ်..
ကဲအဲဒါ မန်းလေးကမုန်.နော်………. ဒါဆို သဘောပေါက်တော့..
နောက်ထပ် ထပ်လုပ်ပြရအုံးမလား………. ဟဲဟဲဟဲ..
အရီးကိုရှင်းပြရင်းနဲ. သများ အိမ်မှာ ထမင်းဟင်းချက်ကျွေးနေရတာ အကုန်ပေါ်ကုန်တော့မှာဘဲ.
အမလေး ပြောာာာာာာကို မပြောချင်ဘူးးးးးးးးးးးးးးးးး ……….. အံ့ပ အံ့ပ ခစ်ခစ်
၀ လည်းမီစားဖူးဘူးကွ..နောက်တစ်ခါလုပ်စားရင် ၀ ကိုခေါ်ပါ..
၀ုတ်ကဲ့ ၀ုတ်ကဲ့ ထောင်ကဲကြီးအူးမိုက်ကို ခေါ်မယ်…
အဲဒါနဲ. စီလုပ်ကြီး ထောနေတယ်ဆို………. နောက်ဖေးက သစ်ပင်လဲလို. ထင်းခုတ်ရောင်းနေတယ်ကြားတယ်..
ထင်းရောင်းရငွေလေးနဲ. ဗက်၆၉ လေး လုပ်လိုက်ကြအုံးစို. ဟဲဟဲဟဲ
တချို့တွေများ မ်ိန်းမကို ထမင်းချက်ကျွေးရတာ… ချက်ကျွေးရတယ်မပြောဘူး…
အောင်မာ ဟဟဟဟ မိန်းမ၀န်ပိ ၀နေတဲ့ သူကများပြောရဒယ်ချိတေးဒယ်…
သများတို.က ချစ်လွန်းလို. ချက်ကျွေးနေဒါ……….ရှင်းပလား…. ဟွင်းဟွင်းဟွင်း
ဟိုတလောက မင်္ဂလာဆောင်သွားတော့ သတို့သား ပုပုလေးနဲ့ ချောချောလေးကို မြင်တော့ ဒို့ရွာက ဆယ်အိမ်ခေါင်းကိုတောင် သတိရမိသေးတော့တယ်။
ဘာမှမဟုတ်ဘူးးးး နောက်တစ်ခါချက်ရင် ခေါ်ကျွေးအောင်လို့ မြှောက်ထားတာ :harr:
ဟင် အလွတ်ကြီး မြှောက်သွားဒါပါလား……. အန်တီမမအိမ်ကို လာပို.အုံးမယ်…..ဟိဟိဟိ
နောက်တစ်ခါ တကယ်ခေါ်မယ်… တကယ်တကယ်..
တရက်တရက် ကျွန်တော့်အိမ်မှာ တိတ်တိတ်ကလေး တွေ.ဆုံပွဲ လုပ်ရအောင်…….
လေးငါးခုစားသွားတယ် နောက်တခေါက်လာစားအုန်းမည် :hee:
ိယို့……အပုဂျီးတို့အဖေ..သများတို့ အယက်သမား သက်မဂကိုရော
အဲတော့ ကျန်း…ဒီတိုက်တိုက် မဗိုက်ကလေးကို ခိုင်းရက်လိုက်တာလို့ ထင်မိ။
ခိုင်းလက်စနဲ့အေ ကျုပ်တို့ တွေ့ဆုံပွဲတွက် အော်ဒါမှာပါရစေ။
အဲဒီ ခနုံထုပ်ဆိုတာလေး တစ်ခါမှ မစားဖူးလို့ပါ။
တွေ့ဆုံပွဲမှာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြောင်း သက်သေပြပလိုက်စမ်းဘာ။
မန်းတလေး မှာ တော့ ဆိတ်သား နဲ့ လုပ်တာ များတယ် မှတ်တာပဲ
ဒီတစ်ခါ နင် မန်းတလေး လာမှ ၊ နင့် ကို လုပ်ခိုင်းပြီး ထွေးညို နဲ့မြည်းမယ်
အယ် ဂယ်ဂျီး လုပ်တတ်တယ်လား ထင်ရဘူးနော် ….
ပြုလုပ်နည်းကလွယ်လွယ်လေးပဲနော် .. မှတ်ထားလိုက်ပီ ဗျာ ….